ဖွဲ့စည်းပုံလေ့လာရေး အစီရင်ခံစာပါ မှတ်ချက် အခြေအမြစ်မရှိသည့် ဖန်တီးမှုဟု အမတ်များဝေဖန်
ပို့စ်တင်ချိန် - 2/01/2014 11:57:00 AM
နေပြည်တော်၊ မဇ္ဈိမ ။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီက ၎င်း၏သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အချိန်မှီတင်သွင်းခဲ့အပြီး သုံးနှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်သည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နဝမပုံမှန် အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ (၃၁. ၁. ၂ဝ၁၄) တွင် လွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
ထိုမှတ်ချက်အား စုစည်းတင်ပြလာသူမှာ တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်း
ဖြစ်ကြောင်းလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ထံမှ သိရသည်။
“ဒါဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်လိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးစီပွား ကာကွယ်လိုသူတွေရဲ့ အားပြိုင်မှုတစ်ခုပါ။ ပုဒ်မ ၅၉(စ)တို့ ၊ ၄၃၆ တို့ကို ဒီအတိုင်းပဲ ထားချင်သူတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ်လိုသူတွေ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိနေတယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးပုဒ်မ
တွေကို မပြင်ဖို့၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကို လိုက်ကန့်ကွက်ဖို့ စည်းရုံးနေတယ်လို့ ပြန်ကြားရတယ်” ဟု သူရဦးအောင်ကိုက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
Written by စိုးသန်းလင်း၊ မင်းမင်း